Fomba Fitety An’i Japana Amin’ny Fandehanana Fiarandalamby Nefa Tsy Mivoaka Ny Trano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2015 13:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Magyar, Italiano, Deutsch, English
Fijery avy any anaty fiarandalamby ao Nagasaki. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Misy vondrom-piarahamonina Japoney manokan-tena amin'ny fanaovana bilaogy miaty lahatsary fotsiny – vlogger- toy ny tenbo shaso (展望車窓), izay azo adika tsotsotra amin'ny hoe “lahatsarin'ny fiarandalamby fandinihana.”
Amin'ny ankapobeny, ny vlogger, matetika mpitatitra an-dalamby, dia mametraka fitaovana fakàna lahatsary mitodika any ivelan'ny varavarankelin'ny fiarandalamby iray (車窓, na shaso, indraindray adika hoe syaso) ary mandrakitra ny zavatra hitany mandritry ny diany manontolo.
Misy zana-tsokajy roa ny lahatsarin'ny tenbo shaso : “fijery mankany aloha” (前面展望, senmen tenbo) nalaina avy any alohan'ny fiarandalamby, ary “fijery avy eo am-baravarankely” (車窓, shaso / syaso) izay mandrakitra ireo endriky ny tontolo manodidina arakaraky ny andalovan'ireny eo amin'ny varavarankelin'ny mpandeha.
Eo amin'ny ora roa eo matetika ny lahatsary nakarina ho ao amin'ny YouTube, ary indraindray tapatapahana ho anaty lisitra mba tsy hahamonamonaina ny faharetan'izy ireny elabe loatra.
Azon'ireo mpijery ireny lahatsary ireny atao, ohatra, ny mandray dia iray avy hatrany avy any amin'ny lohan'ny fiarandalamby ary eo ambany aloky ny Tendrombohitra Fuji miainga ao amin'ny toby fiantsonana ao Shizouoka mankany amin'ny toby fiantsonana ao Tokyo.
Noraketina tamin'ny 2007 ny dia etsy ambony, tao amin'ilay toby tranainin'ny Tokai (東海) limited express train, fotoana fohy talohan'ny nitsaharan'ny tolotra nataony volana vitsy taty aoriana.
Raha misy zotra-nà fiarandalamby iray na tram ao Japana, dia hisy lahatsary shaso miresaka ny dia manontolo akàrina ao amin'ny Youtube. Ohatra, ity lisitra misy lahatsary miisa 40 ity mandrakitra ny dia iray manontolo nataonà fiarandalamby avy ao Osaka nankany Sapporo any amin'ny tendro avaratry ny nosy Hokkaido:
Avy amin'ny dian'ilay fiarandalamby arifomba mpandeha alina Twilight Express no nandraketana azy io, tolotra izay mandra-pitsahany tamin'ny March 2015 dia nampitohy an'i Osaka sy Hokkaido tamin'iny faritra mikintaontaona sy ambanivohitra manamorona ny ranomasin'i Japana iny.
Satria mampiditra tolotra fiarandalamby haingam-pandeha betsaka loatra i Japana, ary noho ny hamoran'ny saran'ny sidina an'habakabaka sy ny laza tsy mitsaha-mitombo azon'ireo fiarabe fitaterana mampitohy toerana lavitra, betsaka tamin'ireo fiarandalamby mampitohy mivantana toerana lavitra no efa natsahatra.
Araka izany dia matetika no mipetraka ho varavarankely ho an'ny tantara ireo lahatsary momba ny fiarandalamby, no sady manome tsiro ny fahatsiarovana ny andro fahiny ho an'ireo mpankafy fiarandalamby.
RailKingJP, Japoney vlogger malaza amin'ny resaka fiarandalamby, dia nahavita lahatsary ampolony mahery momba ny fiarandalamby, matetika mandritra ireo fivezivezeny noho ny asam-pandraharahàna manerana an'i Japana.
Ao anatin'ity lahatsary ity, lahatsary “fijery avy eny aloha” no nalainy teny ambonin'ilay fiarandalamby manana ny lazany Odakyu izay manao tolotra eo anelanelan'i Shinjuku any andrefan'i Tokyo sy ilay tanànan'ny fizahantany ao Hakone, any amin'ny tehezan'ny Tendrombohitra Fuji:
Raha tianao ho fantatra hoe manao ahoana ny endriky ny ao afovoan'i Tokyo, feno lahatsary mirakitra ny fijery avy eny ambonin'ny Yamanote izay mitety manodidina ny tanàna ao :
Fomba iray tsara ihany koa ireny lahatsarinà fijery avy eny ambony fiarandalamby ireny mba handinihana ny fomba fitohizan'ny fiarenan'i Japana avy tamin'ilay tsonamì sy horohorontany tamin'ny 2011 izay nandravarava ampahany be tamin'ireo faritra amorontsiraka any avaratra atsinanan'iTokyo.
Ao anatin'ity lahatsary eto ambany ity, borojins, vlogger iray hafa be mpanaraka ao amin'ny YouTube raha resaka fiarandalamby, dia nandrakitra ny fijery avy amin'ny Sanriku Railway izay naverina nosokafana indray, tsy ela akory izao :
Betsaka tamin'ireo lalamby no rava nandritra ilay tsonamì tamin'ny 2011, ary mbola mampisalasala ny hoe hiverenan'ny zotran-dalamby hiasa indray. Kanefa, narenina indray ny lalamby ary mitondra ireo mpizahatany miverina ho any amin'ny faritra.
Raha misy lahatsary an'arivony ao amin'ny Youtube ahafahanao mitety, saiky ny faritra rehetra mihitsy ao Japana amin'ny alàlan'ny fiarandalamby, avy eo amin'ny solosainao ihany, dia ho fanamby goavana ihany ny hisafidy izay toerana haleha raha tsy mahay mamaky ny teny Japoney ianao.
Toerana iray tsara anombohana azy ny ao amin'ny lisitra Wikipedia misy ireo zotram-piarandalamby ao Japana. Misafidiana zotra iray, ary tadiavo ny pejy amin'ny fiteny Japoney mifandraika aminy mba hahitàna ny fiantso ilay zotra ao Japana.
Ataovy dika petaka ny anaran'ilay zotra amin'ny fiteny Japoney ho ao amin'ny faritra natao hikarohana ao amin'ny YouTube, aza adino ny manampy an'ity 展望車窓:
Amin'io dia ho azontsika atao ny manomboka amin'ny Wikipedia ary mahita ny lahatsary nalaina avy eny ambonin'ny Chiba Monorail.
Lisitra isaky ny faritra ao Japana
borojins, vlogger ao amin'ny Youtube dia nandamina ihany koa ny sasany tamin'ireo lahatsary noraketiny ho anaty lisitra mifanaraka amin'ny faritra, ary hita ao anatin'ny lohatenin'ny lisitra ny teny Anglisy.
Syaso.com koa dia manana lisitra ampolony ao amin'ny YouTube, ahitàna ireo zotram-piarandalamby miainga avy amin'ny faritra tsirairay ao Japana, na dia vitsy aza no ahitàna torolalana amin'ny teny Anglisy.